Bam gacmeedyo lagu weeraray ciidamada dowlada ee ka howlgala Ex Control Afgooye | TOP NEWS
Bam gacmeedyo lagu weeraray ciidamada dowlada ee ka howlgala Ex Control Afgooye
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya Weeraro loo adeegsaday Qaraxyo Bam-Banooyin ah oo ka dhacay Bar Kontorool oo ay Ciidamada Dowladad Soomaaliya ku leeyihiin Isgoyska Ex Control Afgooye ee Duleedka magaalada Muqdisho.
Qaraxyada oo dhacay Xalay Fiidkii hore ayaa la sheegay in lala eegtay goob lagu jaro Boonada Canshuurta Gaadiidka magaalada Muqdisho waxaana ku dhaawacmay ugu yaraan 3 Ka mid ah Ciidanka Dowlada Soomaaliya sida ay noo xaqiijiyeen Laamaha amaanka.
Saraakiisha Ciidanka ayaasheegay in Ciidanka dhaawacmay ay ku jiraan kuwa ay Xaaladooda aad u liidato waxaana la dhigay Isbtaal ku yaala magaalada Muqdisho.
Ciidanka Dowladda ee la weeraray ayaa Qaraxa ka dib Sameeyay Baaritaano mudo halkaasi ka socday lamana sheegin Wax dad ah oo lagu soo qab qabtay.
Weerarka ayaa ku soo beegmay Saacado yar ka dib markii meel u dhax Ex-Control lagu dilay mid ka mid ah Ergadii Baarlamaanka Soomaaliya ku soo dooratay magaalada Baydhabo ee Xarunta KMG ah ee Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Bam gacmeedyo lagu weeraray ciidamada dowlada ee ka howlgala Ex Control Afgooye added by Tifaftiraha Somalida Maanta on October 11, 2017